Prof. Mary Abukutsa-Onyanko ao amin'ny OA Publication and Security Food - AfricaArXiv
navoakan'ny Jo Havemann on 19 ny Desambra 2019 19 ny Desambra 2019
Tamin'ny voalohan'ny volana Desambra 2019, Prof Abukutsu-Onyanko dia nanolotra ny asany tao amin'ny UTC-SPARC Africa Open Access Symposium 2019 Symposium any Cape Town, Afrika Atsimo.
Iray amin'ireo mpikaroka momba ny hortikultika malaza any Afrika, ny Profesora Mary Abukutsa-Onyango dia hizara ny zava-niainany izay nanasongadina fa zava-dehibe ho an'ny fampandrosoana ny fidirana amin'ny fampahalalana. # OASymp2019 #SPARC #SPARCAfrica #openaccess #openuct #libsense #wacren #capetown pic.twitter.com/NzCgyKwYKW
- Afrika UCT-SPARC (@SPARCAfrica) Novambra 22, 2019
Jereo ny fanolorana amin'ny Zenodo:
Tokony ho folo taona lasa izay, Leslie Chan Nitafatafa Prof. Mary Abukutsa momba ny asany amin'ny maha mpahay siansa ny fambolena momba ny sakafo ara-tsakafo sy ny legioma afovoany.
Ny fidirana amin'ny alàlan'ny fidirana malalaka dia tsy azo ihodivirana. Tena manan-danja tokoa izy ireo amin'izao fotoana izao. […] Rehefa manao fikarohana isika dia tsy mitombina raha toa ianao itanao eo ambanin'ny latabatra na ao anaty efi-trano. Mila mizara ny vaovao isika, ny fikarohana ataontsika - na izany aza kely - raha mbola misy fiantraikany amin'ny fampandrosoana, eo amin'ny fiveloman'ny vahoaka sy ny fomba fisainan'ny olona.
Jereo eto ny dinidinika feno:
Sokajy:	Open AccessFifandraisana ara-tsiansa
Tags: Legioma afrikaninaSakafo ara-tsakafoSafidy fidirana malalaka